Fampisehoana Oniversaly 2010 - Wikipedia
Trano mijoalajoala mitondra ny lokon'ny ekspô 2010
Ny Expo 2010 tany sina (sinôgrama notsorina : 2010年上海世界博览会 pinyin : 2010 nián shánghăi shìjiè bólănhuì) dia Fampisehoana Oniversaly any Shanghai, any Sina, manomboka amin'ny 1 Mey hatramin'ny 31 Oktobra 2010. Voafidin'ny Birao iraisam-pirenen'ny ekpo ny tanànan'ny Shanghai tamin'ny 2002 mba handray io fampisehoana oniversaly io.
Famisavisana[hanova | hanova ny fango]
Ny lohahevitr'ilay fampisehoana dia : « Better City, better live » amin'ny teny anglisy na « 城市，让生活更美好 »(pinyin : chéngshì ràng shēnghuó gèng mĕihăo) amin'ny teny sinoa. Ny logon'ny expo dia ilay sinograma 世 (shì) misika «tontolo» novaina mba haneho olona telo miaraka, miaraka amin'ny daty 2010. Ny maskôty Haibao (海宝) dia manana endriky ny sinôgrama 人 midika « olombelona » (pinyin : rén).
Ny toerana misy ilay fampisehoana dia eo anelanelan'ny tetezana Nanpu sy Lupu, mandava ny renirano Huangpu, eo anivon'ny Shanghai. Ny Velarany dia 5,28 km2. Ny tetibola dia 30 miliara renminbi, ary 70–100 tapitrisa eo ho eo ny isan'ny mpitsidika andresana, io ankehitriny no fampisehoana oniversaly ngeza indrindra tamin'izay misy. Tamin'ny 23 Septambra 2009, firenena sy fikambanana iraisam-pirenena 242 no nanamafy ny fandraisan'anjarany amin'ny fampisehoana oniversalin'i Shanghai
((fr)) sehatra ofisialin'ny expo2010
((en)) Page d'Expo Museum consacrée à l'Expo 2010
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fampisehoana_Oniversaly_2010&oldid=602706"
Voaova farany tamin'ny 11 Martsa 2013 amin'ny 11:19 ity pejy ity.